သတိပြုရှောင်ဖယ် တက်တူး အန္တရာယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » သတိပြုရှောင်ဖယ် တက်တူး အန္တရာယ်
သတိပြုရှောင်ဖယ် တက်တူး အန္တရာယ်
Posted by မှော်ဆရာ on Aug 20, 2011 in Health & Fitness | 33 comments
အင်း …. မပြောမဖြစ်လို့ ပြောလိုက်ပါဦးမယ်
ဆရာလုပ်တယ် ထင်ရင်လဲ ခွင့်လွှတ်.
တက်တူးဆရာတွေကလဲ ထမင်းအိုး တုတ်နဲ့ထိုးတယ်ထင်ရင် ခွင့်လွှတ်
အခုတစ်လော တက်တူးဆိုတာတွေ တော်တော်ခေတ်ပြန်စားလာတာ တွေ့ရတယ်
အရင်တုန်းကတော့ တက်တူးမခေါ်ဘူး..ဆေးမင်ကြောင်ခေါ်တယ် ။ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးထားရင် လမ်းသရဲလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။လမ်းသရဲလို့ အထင်ခံရမှာ တစ်ကြောင်း ပြန်လဲဖျက်မရတော့ သေရာပါ အမှတ်ဆိုပြီး လူအထင်သေးမှာတကြောင်းကြောင့် ဟိုခေတ်တုန်းက အမျိုးကောင်းသားသမီးများ ရှောင်ကျဉ်ကြပါတယ်။(ဆေးမှင်ကြောင်ဆရာ မူးနေတုန်း သွားထိုးခိုင်းမိလို့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် အရုပ်တွေဖြစ်လာတာ၊စာလုံးပေါင်းမှား ရေးမိလို့ သူများမြင် ရီစရာဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့ တက်တူးသမားတွေကို တွေ့ဖူးတာလဲ ပါတာပေါ့နော်..၊)
အခုခေတ်ကတော့ မင်းသမီး မင်းသားတွေက အစ ထိုးပြ၊ အင်တာနက်ပေါ် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ တင်ပြ နေတော့လဲ ခေတ်လူငယ် တွေလိုက်လံ အတုခိုးလာတာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းလို့ ပြောရမလားပဲ….။
ဒါပေမယ့် တက်တူးထိုးမယ်လို့ စဉ်းစားမိရင်တော့ ဒီအကြောင်းလေးကို နဲနဲတော့ ခေါင်းတဲထည့်စေချင်တယ်။
မနေ့က ကျွန်တော်တို့ နယ်မြို့လေးကို တက်တူးထိုးတဲ့ ဆရာတစ်ယောက် ရန်ကုန်ကေ၇ာက်လာတယ်။ လက်ရာကောင်းတယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော်လဲ ဗဟုသုတအနေနဲ့ သွားလေ့လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဆီမှာ အထိုးခံနေတဲ့ သူကိုတွေ့တွေ့ ခြင်းပဲ ကျွန်တော် ပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်။ ငါ ဒီအဖြစ်မျိုးကို တားဆီးရမယ်လို့လဲ တွေးမိတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို ရေးပါတယ်။
အဲဒီ့နေ့က ကျွန်တော် ရောက်သွားတော့ ပထမဆုံးထိုးနေတဲ့သူက HIV posative ပါ။ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်တောင် သူ့မှာဒီပိုးရှိနေတယ်ဆိုတာ မသိသေးပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သိနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့မြို့ရဲ့ သွေးလှူရှင်အဖွဲ့မှာ ကျွန်တော်က အတွင်းရေးမှုး ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဘာကြောင့် ဒီပိုစ့်ကို ရေးရတယ်ဆိုတာ သိသင့်ပါပြီ။
တစ်ခါသုံးအပ်ကို သုံးတယ်ပဲပြောပြော၊ဘယ်လောက်သန့်ရှင်းတယ်ပဲ ပြောပြော ကျွန်တော့အသက်ကို လောင်းကြေးတင်ပြီး တက်တူးဆရာရဲ့အပ်မှာ ရောဂါပိုး ပါမပါ မစမ်းသပ်ရဲပါဘူး။သူ့နောက်မှာ ရန်ကုန်ကဆရာရောက်တုန်း တက်တိုးအထိုးခံဖို့စောင့်နေတဲ့ တစ်ပြုံတစ်မကြီးကိုလဲ ကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မတားဆီးနှိုင်ခဲ့ပါဘူး။တားဆီးခဲ့ရင်လဲ ကျွန်တော် ဒီစာကို နတ်ပြည်ကနေ ရေးနေရမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တက်တူးထိုးတော့မယ့်သူတွေ ဒီအဖြစ်ကို သိသင့်တယ်ထင်လို့ ၊မရေးရင် ကျွန်တော့တာဝန် မကြေသလို ခံစားရလို့ ကျွန်တော် ရေးလိုက်ပါတယ်။
တက်တူးဆရာရဲ့ အပ်သန့်မသန့်ကို ကျွန်တော်မငြင်းပါ။ ရောဂါပိုး ကူးနှိုင် မကူးနှိုင် ကျွန်တော် မငြင်းပါ။သိသင့်တယ် ထင်တာလေးပဲ ကျွန်တော် ရေးပြလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ့်အသက်ကို လောင်းကြေးထပ်သင့် မထပ်သင့်ကတော့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ်ပါ။
Dear Mhaw Sayar,
You didn’t take the new G-mail account ( I made it for you )
May I encourage you to take it & change the password.
အီးမေး ပါစ်ဝါ့ကို လက်ခံရရှိပါတယ် ခင်ဗျာ။ ပါစ်ဝါ့ကို မချိန်းရသေးတာပါ။ ချိန်းလိုက်ပါ့မယ် ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။…..
အသိ လင်မယား နှစ်ယောက်လုံး ပုံစံ ဆင်တူ ထိုးပြီး ညဘက် အနာ အရှိန်တက်လာတော့ မခံနိုင်တာနဲ့ အရက်တွေ မူးနေအောင်သောက်ပြီး ညည ကျော်ဖြတ်ရတာ ၁ပတ်လောက် ရှိတယ် ဆိုလား ကြားဖူးတယ်။
စိတ်ဆိုတာ အမြဲတမ်း တသက်မတ်တည်း မဖြစ်နိုင်တဲ့ သဘောရှိတဲ့ အတွက်
တသက်လုံး အတွက် မဖျက်နိုင်တဲ့ ပုံကြီးဆိုရင် နောက်တချိန်သဘောမကျတဲ့ အခါကျရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
အိမ်ထောင်ပြုဘုရားတည် ဆေးမင်ရေ စုတ်ထိုး အချိန်လွန်ရင် ပြင်မရတော့ပါဘူးကွယ်။ဝေးဝေးရှောင်ပါ အကောင်းဆုံးပါဘဲ
အပ်အသန့်နဲ့ ထိုးပေမယ့်လဲ
သုံးတဲ့ ဆေး နဲ့ 
အရေပြား ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ ဆဲလ် နဲ့ 
၁၀၀ မှာ ၅၀ လောက် က
အရေပြား ကင်ဆာ ဖြစ်တယ် တဲ့
(မယုံ ထိုးကြည့်ကြပါ ၊ ကျွန်တော် က တော့ ကြောက်လို့ မထိုးပါ )
ရှေးခေတ် က ဗမာလူမျိုးတွေ
ဘာ ကင်ဆာ မှ မရှိ
ဘာဆေးနဲ့ များ ထိုးခဲ့ပါလိမ့်
ပေါ့စတစ်ရှိနေတာကို.. သွေးစစ်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက.. ကာယကံရှင်ကို အသိမပေးတာဘာသဘောလည်းမသိ..
သူကြီးရယ် .. တချိန်က မြန်မာကြီးတွေက အမျိုးကို ချစ်တယ် .. တလင်တမယား ဆိုတာ ရှိခဲ့ကြတယ် .. မူးယစ်ဆေး အကြောထဲ ထိုးတာ မရှိခဲ့ကြဘူး .. သွေးသွင်းဆေးကုတာလဲ မရှိခဲ့ကြဘူး .. ဒါကြောင့် အဲဒီအချိန်တုန်းက အေအိုင်ဒီအက်စ် ဆိုတာ ရှိခဲ့လိမ့်မယ် မထင်ဘူး ..
အနာခံနိုင်တာကို အစွမ်းပြတဲ့အနေနဲ့လဲ ထိုးကွင်းထိုးတာကို လူကြားထဲမှာ လုပ်ပြခဲ့တာ
အခုခေတ်က သူကြီးတို့ သိသလိုပါပဲ ရောဂါစုံတယ် .. ကူးစက်နည်းတွေလဲ အမျိုးမျိုးပဲ
ပေါ့စတစ်ကို အသိမပေးရခြင်းအကြောင်းရင်းက “သွေးလှူတဲ့အခါ စေတနာ နဲ့ လှူကြပေမယ့် သွေးလက်ခံတဲ့ လူနာကို ရောဂါအမျိုးမျိုး မကူးစက်သွားအောင်လို့ HIV, Malaria, Hepatitis B (တကယ်စစ်နိုင်ရင် C ပါ စစ်ရမှာပေါ့) Syphilis တွေကို စစ်ရတယ် .. ဒီလိုစစ်တဲ့နေရာမှာ တခြားရောဂါတွေအတွက်တော့ ဘာကြောင့်စစ်စစ် စစ်ခွင့် ရှိပေမယ့် HIV အတွက်တော့ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်းကို မလုပ်ပဲ စစ်ခွင့် မရှိဘူး .. သို့သော် သွေးလက်ခံအတွက်သာ ဒီသွေးကို သွင်းသင့် မသွင်းသင့်အတွက် စစ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သွေးလှူသူကို အသိမပေးပဲ သွေးကိုသာ ဖျက်ဆီးလိုက်တယ် .. တချိန်က လှူတဲ့လူကို ပြန်ခေါ်ပြီး နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးတာ လုပ်လို့ သွေးလှူချင်သူတွေ အတော် နည်းသွားတဲ့အတွက် နည်းလမ်း ပြန် ပြင်လိုက်တာပါ .. ဒါကြောင့် (+) သွေးလှူရှင်ကို ဆေးရုံကသာ သိတယ် .. ကာယကံရှင် မသိတာပါ .. မြို့ကြီးတွေမှာတော့ အကြောင်း တခုခု ပြပြီး လှူတာကို လက်ခံဖို့ ငြင်းလို့ရပါတယ် .. သွေးပေါင် မပြည့်လို့ အစရှိသဖြင့် ပေါ့ ..
တဆက်တည်းမှာလဲ ဒီလို စစ်ဆေးတာတွေကြောင့် ငွေကုန်ကြေးကျ ရှိတယ် .. အစိုးရကလဲ အမြဲ မစိုက်နိုင်လို့ တတ်နိုင်သူတွေအတွက် သွေးလက်ခံတဲ့အခါ သွေးအတွက် မဟုတ်ပဲ ဓါတ်ခွဲခန်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ် ပြန်တောင်းခံတယ် .. သွေးရောင်းတာ မဟုတ်ကြောင်းကိုလဲ ရေးလိုက်ပါရစေ
မှန်ပါတယ် ခင်ဗျာ …..ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဖြေကို မိုးသီတာစိုးက အပြည့်စုံဆုံး ဖြေပေးလိုက်တာပါပဲ။ ကျွန်တော် ပြန်ဖြေရင်တောင် ဒီလောက်အပြည့်စုံဆုံး ဖြေနှိုင်ပါ့မလား မသိဘူး။ ဖြေပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ အပြည့်စုံဖြေပေးထားလို့ သိရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ။
ကျွန်မသိချင်တာ တစ်ခုရှိသေးတယ် …. အရင်က သွေးမလှူခင် ဘာညာတွေ ဖြည့်ရတယ်လေ … အဲ့ဒီအခါမှာ HIV + ရှိတဲ့လူတယောက်ဟာ …. ကူးစက်စေနိုင်တဲ့ အနေထိုင် အပြုမူ ရှိတယ် မရှိဘူး.. သူကိုယ်တိုင်သိထားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … ။ တစ်ခါတစ်လေ … သွေးလှူဖို့ အချက်လက်တွေ မကိုက်ညီလျှင် လှူလို့ မရပါဘူး… ။ အလှူရှင်ဆီမှာ ပိုးတွေ့ခဲလျှင် …(တကယ်လည်း အသုံးမ၀င်တာမို့…) ဘာမှ မပြောပဲ သွေးဖောက်ယူတာထက်စာလျှင် … တစ်ခုခု အကြောင်းပြပြီး ပြန်လွှတ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် … ။
ဟား ဟ.. ဒီ ပို့စ် ကို ရေးတဲ့ ကိုမှော်ဆရာရယ်.. ကြည့်လဲ လုပ်ပါဦး.. HIV positive ရှိတဲ့ သူကို သူတောင် မသိဘူး.. ခင်ဗျားက သိတယ်ဆိုတော့က.. သူ့ကို ခင်ဗျား ဘာလို့ မပြောတာလဲ… ဒီလိုဆို ခင်ဗျားမှာလဲ ရှိနေရင် ရှိနိုင်တယ်နော်….. ကြည့်လဲ လုပ်ပါဗျာ.. ပိုက်ဆံလိုချင်ရင် သူကြီးဆီမှာ သွားချေးလေ. ကျနော် အိမ်သိပါတယ်ဗျ… လျှောက်တော့ မရွှီးနဲ့ သောက်မြင်ကတ်တယ်… ခေတ်နောက်ကျတဲ့ အတွေးတွေ ခင်ဗျား ခေါင်းနဲ့အတူ မြေမြုပ်ပစ်လိုက်.. ရှင်းလား မရှင်းရင် နှစ်ခါပြန်ဖတ်.. မှတ်ထားလိုက်ပါဦး.. သေရင် ကိုယ့်နောက်ပါတာဆိုလို့ TATOO နဲ့ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကံ ပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ..
ပြသနာမရှိပါဘူး ။ ထိုးတာ မထိုးတာ ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ ကိုယ်လို့ပြောပြီးသား။ မရှင်းရင်လဲ နောက်တစ်ခါ ပြန်ဖတ်လိုက်ဦး ။ ဒီပိုစ်ကို ရေးတာ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်အောင်လို့ရေးတာ ။ လက်ခံတာ လက်မခံတာ ခင်ဗျား အပိုင်း ။ တက်တူးကို သေတဲ့အထိ ခင်ဗျား ယူသွားချင်တယ် ဆိုရင်လဲ ခင်ဗျား အပိုင်း ။သေရင် တက်တူးက ကိုယ့်နောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ခင်ဗျားအတွေးအခေါ်ကတော့ အောချလောက်စရာ ချီးကျူးပါတယ်။
အပေါ်က Moethidasoe ရဲ့ ကွန်မန့်ကို ခင်ဗျား မဖတ်ရသေးရင် သေချာ ပြန်ဖတ်ဦး ။
နေဦး စကားမစပ် ခင်ဗျားက တက်တူး ထိုးစားတဲ့သူလား…..?
တက်တူးထိုးတော့မယ့်သူတွေ ဒီအဖြစ်ကို သိသင့်တယ်ထင်လို့ ကျွန်တော် ရေးလိုက်ပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ ကူးစက်ရောဂါအမျိုးမျိုး ခေတ်စားနေတယ်လေ
အရေပြားကို ဖောက်ထွင်းတဲ့ ချွန်ထက်တဲ့ ကိရိယာတို့ကြောင့် HIV, အသည်းရောင်အသားဝါ၊ အခြား သွေးကတဆင့် ကူးနိုင်တာ မှန်သမျှ ကူးတတ်တယ်
တက်တူးထိုးတယ် ဆိုတာ အရေပြားကို ပေါက်ပြဲအောင် အပ်နဲ့ထိုးတာ
တခါသုံး အပ် သုံးတယ် ဆိုဦးတော့ ဆေးမှာ ပြဿနာ .. ပိုးတွေ ဆေးရည်ထဲမှာ ဘယ်နှမိနစ် ကြာအောင် ရှင်နိုင်သလဲ ဆိုတာကိုတော့ သုတေသန မလုပ်ထားလို့ မသိနိုင်ပါ .. ဒါကြောင့် အသက်ကို လောင်းကြေး ထပ်ပြီး ထိုးကြမှာလား
celebrity တွေက တခါသုံးအပ် တကြိမ်ထဲ ဖျော်တဲ့ ဆေးတွေ သုံးသလား မသုံးဘူးလား မသိကြဘူး .. ရပ်ကွက် ဘုရားပွဲတွေမှာတော့ ဒီဆေးရည်ထဲမှာပဲ နှစ်ပြီး ထိုးနေကြတာ ..
နောက်ပြီး celebrity တွေမှာ အရုပ်မြင်တိုင်း tattoo ထိုးတယ်လို့ မထင်နဲ့ .. ရေစိုခံ sticker တွေ ကပ်ထားတာလဲ ဖြစ်နိုင်သေးတယ်
မတု သင့်တာကို မတု ကြပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်
ဒေါက်တာမှန်းမသိလို့ user name အတိုင်း ခေါ်မိပါတယ် ။ ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ။ ဒေါက်တာဝင်ဆွေးနွေးပေးတာကိုလဲ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင် 450 ကျော်ရှိပါတယ် ။ တစ်လမှာ သွေးအလုံးရေ ပျမ်းမျှ 60 လောက်လှူဒါန်းနေရပါတယ်။ သွေးထ်ိမ်းသိမ်းစရာ ရေခဲသေတ္တာကောင်းကောင်းမရှိတာတစ်ကြောင်း ၊ လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲကြောင့် တစ်ကြောင်း လိုအပ်ခါမှပဲ သွေးလှူရှင်ကို ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်ခေါ် ၊ ဆေးရုံကိုပို့ပေး ၊ အစစအရာရာ ကူညီ ၊နောက် အိမ်ကို ပြန်လိုက်ပို့ပေး စသည်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။ ဘယ်မြို့ကလဲဆိုတာတော့ ၀က်ဆိုက်ထဲမှာတော့မပြောတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှု တွေကို ဒေါက်တာဆီ ပို့ပေးချင်ပါတယ် ။ဒေါက်တာ စိတ်ဝင်စားရင် mhaw.sayar85@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပေးပါခင်ဗျာ။ဒေါက်တာဆီက အဖွဲ့အတွက် လမ်းညွှန်ချက်လဲ လိုချင်ပါတယ်။
ဘု.မသိ..ဘ.မသိပဲနဲ့ တော့ စွတ်မထိုးသင့်ဘူးဗျ..
ဘုရားပွဲတို့ ..သူစိမ်း တတ်တူးဆရာတို့ .လက်တဲ့စမ်းလျှောက်ထိုးနေတဲ့သူတို့ နဲ့ တော့ မထိုးကြနဲ့ ဗျ
ထိုးတဲ့သူက..လက်ရာလဲ ကောင်းမယ်..ဆေးလဲ တစ်ခါသုံး၊..စက်ဆိုလဲ အသုံးပြုပြီး ရေနွေးနဲ့ စိမ် ပြီးဆေး။သို့ ..တစ်ခါသုံးအပ်.(တစ်ချောင်းမှ ၅၀ လောက်ရှိတာ)ထိုးတဲ့အခါ..လက်အိတ်စွတ်၊
အထိုးခံတဲ့သူကလဲ အရုပ်ကို ဂရုစိုက်…
မလျှော်ရသေးတဲ့.မှိုတတ်တဲ့ အ၀တ်တွေ မ၀တ်နဲ့ ၊အနာဖြစ်..အနာရင့်
စေတဲ့ အစားတွေမစားနဲ့ ..ပုဇွန်တို့ ..၀က်တို့ ..အနာမကျခင်ရှောင်ထား..ပိုးမ၀င်အောင် လဲ ဂရုစိုက်.
ထိုးတဲ့လူက ကောင်းကောင်းထိုးပေးပေမဲ့..အထိုးခံတဲ့လူက ဂရုမစိုက်ရင်လဲ ရုပ်ပျက်ဦးမယ်
အဓိက.က ဘုရားပွဲက ၅၀၀ဘိုး.တစ်ထောင်ဘိုး တတ်တူးတွေတော့ရှောင်ပါ
မြန်မာပြည်က.. အုပ်အရောရောကျောက်အရောရော လာသမျှလူ.. အကုန်အပ်တချောင်းထဲနဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်.. တက်တူးမထိုးတာကောင်းတယ်ထင်မိတယ်..။
ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာကို.. အသည်းအသန်ကို.. ပညာပေးစာတွေထုတ်ရမှာပဲ..။
ခင်ဗျားအစားဝင်ဖြေပေးသွားသူက.. ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာ..ပရို..ဒေါက်တာမိုးသီတာစိုး..ပါခင်ဗျ…။ သထိမထားမိမှာစိုးလို့ပါ..။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်က ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ပါ ။ မှတ်တမ်းတင်နှိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ အထောက်အထားနဲ့ ဓါတ်ပုံရခဲ့ရင် တင်ပေးပါ့မယ်။
မှော်စရာရေ… အထောက်ထားလိုချင်လျှင် … ညဘက် သီရိမင်္ဂလာဈေးကိုသွား … အဲ့ဒီမှာ ပေါ်တင်ပဲ ထိုးနေကြတာ ..မြင်ရတဲ့လူတောင် ကြက်သီးထတယ် ။ ညဘက်ဖုန်းနဲ့ လှမ်းရိုက်လျှင် ဘာမှ မပါလို့ …မည်းနေလို့… ငြိမ်နေတာ … ကျွန်မအဲ့ဒါကြီးမြင်ပြီးမသတီတာ ကြာပြီ
မှော်ဆရာ… သွေးလှူခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေရေးပေးပါအုံးနော်၊
ကျွန်တော်သွေးတွေ့ ရင်မူးတတ်တယ်၊သွေးကောလှူလို့ ရလား၊
” တက်တူးထိုးရင် HIV. . AIDS ကူးစက်တတ်တယ်…” .. ဟား ဟား ခင်ဗျား အရင်လူတွေ ပြောတာကြားဖူးတိုင်း မျက်လုံးမှိတ်ပီး စွတ်ပစ်နေတာပဲ … ဒါမျိုးကြတော့ ခင်ဗျားက လိုက်နာတယ်လား.. သေမှာ ကြောက်ပီး မျက်လုံးမှိတ်ယုံနေတာပဲကိုး..
အပေါ်က ” Capatinacerica ” သုံးသပ်ထားတာလေးတွေ သေချာလိုက်မှတ်လိုက်ဦး… ဒါက ခင်ဗျား ရဲ့ စဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်တဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ အရည်သွေးပေါ့… တက်တူးထိုးရင် ရောဂါဖြစ်တယ်ဟေ့ ဖြစ်တယ်ဟေ့.. ဒါက ခင်ဗျား ကြားဖူးတာပါ… ဒီလိုပဲ လူတိုင်း (လူတိုင်း)လဲ ကြားဖူးတာပေါ့ . . .သေချာတာတော့ လူတိုင်းက ဦးနှောက်မရှိတာမဖြစ်နိုင်ဘူး… ခင်ဗျား ခံယူတတ်ရင် အနုပညာတခုပါဗျ… သွားတော့ မထိုးနဲ့ဦးနော်.. တော်ကြာ တက်တူးက အရမ်းလဲ နာတယ်ဆိုပီး Post ထပ်တင်လာဦးမယ်
( စကားမစပ်.. ကျူပ်က တက်တူးထိုးစားတဲ့သူလဲ မဟုတ်ပါဘူး… တခုပဲ… သူများပြောတာကြားဖူးယုံနဲ့ (ကိုယ်ကြောက်တာနဲ့ပဲ ) စွတ်စတ်ပြောတာမျိုးကို သိပ်ကြည့်မရတတ်လို့ပါ )
တချို့အရာတွေလဲ မကောင်းမှန်းသိရဲ့သားနဲ့ လုပ်နေကြတာတွေ လူတိုင်းပါပဲ.. လူတိုင်းနော် ခင်ဗျားလဲ ပါနေပါတယ် . ဟုတ်တယ်ဟုတ်… ကျုပ်ပြောတာမှန်ရင် အခု ခင်ဗျား ကြည့်နေတဲ့ မော်နီတာနဲ့ ခေါင်းနဲ့ပြေးတိုက်လိုက်ဗျာ . ကဲ လုပ်ဗျာ မှော်ချာ
Tattoo ထိုးချင်သပဆိုလည်း သေချာ လေ့လာပေါ့ ။ လမ်းဘေးက ဘုရားပွဲမှာလို တယောက်ပြီး တယောက်ဆက်နေတဲ့ နေရာတွေတော့ ရှောင်သင့်ပါတယ်။ တကယ့် ဆိုင်ကြီးတွေမှာ ဘယ်လို များလုပ်ပေး နေလဲ ။ ဘာတွေသုံးလည်း သေချာ မေးမြန်းပြီးမှပဲ ထိုးချင်ထိုးတာကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဒီအတိုင်းကြီး လက်လွတ်စပယ် တွေ့ရာနေရာမှာ အထိုးခံမှာကိုတော့ အားမပေးပါဘူး။ ပြီးတော့ နောက်တခုပြောချင်တာက ရန်ုကုန်မှာ မြို့ထဲက ကုန်းကျော်တံတားပေါ်တွေမှာ တွေ့ရတတ်တယ် ၊ တချို့နေရာတွေမှာလည်း ရှိပါတယ် ။ ပွေး ၊ ယားနာ ၊ ကြွက်နို့သတ်ပေးတယ်ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေနဲ့ ၊ အဲဒီ့နေရာတွေမှာလည်း ကိုယ့်ရောဂါကို မကုစေချင်ပါဘူး။ သူတို့သုံးတဲ့ ပစ္စည်းတွေ သန့်မယ်ထင်ပါသလား ။ အသိတယောက်ရှိပါတယ် ။ အဲလို လုပ်စားတဲ့သူတဦးပါ ။ သူရဲ့ ကြွက်နို့သတ်ပေးပုံလေး ပြောပြပါမယ် ။ ကြွက်နို့သတ်ချင်လို့ သူ့ဆီလာတဲ့ သူကို စကားတပြောပြောနဲ့ ဟိုမေးဒီမေးနဲ့ပေါ့ အဲဒီ့အနာကို သူ့ရဲ့ လက်သည်းနဲ့ ထိုးခွာပြီးပဲ့ အပေါ်အဖုလေး ပဲ့သွားတော့ ထုံး ကို ဂွမ်းနဲ့အုပ်ပေးလိုက်တာပါပဲ ။ အဲဒါသူ့ရဲ့ ကြွက်နို့သတ်နည်းပါတဲ့လေ။ သူက လက်သည်းနဲ့ ခွာပစ်တာ ။တချို့က သူတို့ဓါးလေးတွေနဲ့ ကုတာတွေလည်း ရှိပါတယ်တဲ့ ။ ကဲ … ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ။
ခုနောက်ပိုင်း တက်တူးတွေမှာ တသက်လုံးဖျက်မရတော့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ
ဥပမာ-တစ်နှစ်ခံတက်တူးတွေ ရှိတယ်လို့လည်း ကြားမိပါတယ်
စိတ်ချရလောက်တယ်လို့ ထင်တာပဲ ………..
အားလုံး တစ်ခါသုံး ဆိုရင် ဘာပြဿနာ ရှိမှာလဲ ..
အခုဟာက share ဆိုတာကို အဓိကထား ပြောနေတာ ..
celebrity တွေ ဘယ်လို သုံးပြီးထိုးလဲ ဆိုတာကို လူတွေ မသိပေမယ့်
တက်တူးနဲ့ လှတယ် ဆိုတာလောက်သာ သိပြီး နောက်က မဆင်မခြင် လိုက်ကြမယ့် လူတွေအတွက် ပြောဆိုရေးသားကြတာပါ
တစ်ခါသုံးဆိုတာနဲ့ ထိုးရင်ပြသာနာမရှိဘူးဆိုတာ တော်တော်များများ
နားလည်ကြမှာပါ အဲတာတောင် လှချင်တာပဲသိပြီး မဆင်မခြင် သတိမပြုပဲ
အရင်ဆုံး ပြောချင်တာ ပို့စ်တင်သူရဲ့ စေတနာ ကိုနားလည်၊အသိအမှတ်ပြုပါတယ်
လူတိုင်း ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်ပါလား ဆိုတဲ့ အသိပညာတော့ ရှိသင့်ပါတယ် ဒီကိစ္စက ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး အသက်နဲ့ရင်းပြီး လောက်ရလောက်အောင် အရေးပါတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါ
လောကမှာ အမြဲဆိုတာ မရှိပါ ၊ အခုပဲ ကြိုက်လှပါချေရဲ့ဆိုတဲ့ အရာတောင် ခဏနေ ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်တော့တာပါ ၊ ဘာရောဂါမှ မဖြစ်ဘူးထား နောင် ကိုယ်ထိုးထားတဲ့ ပုံကို မကြိုက်တော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ၊ အဲဒီအစား စတစ်ကာ ကပ်တာမျိုးဆိုလဲ ရတာပဲ
ကိုယ်ကလဲ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကိုလဲသိတယ်
ဒါပေမဲ့ မရဘူး ကျုပ်ကတော့ ထိုးမှာပဲ ဆိုလို့ကတော့ ချသာချဗျာ လောကကြီးမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်လိုက်ရတော့လဲ ကျေနပ်မှုကိုရတာပေါ့ အဲ နောင်တတော့ မရကြေး
ကျော်ဟိန်းကြီး ငယ်ငယ်တုန်းက စိန်ဂေါ်လီဂိုဏ်း ၀င်ပြီး ပုခုံးမှာ တက်တူး ထိုးထားတာ .. ကြီးလာတော့မှ လေဆာနဲ့ ဖျက်ရတယ်
စောစောပိုင်း ဘုန်းကြီးဝတ်တုန်းကဆို သင်္ကန်းအောက်က တက်တူးကြီးပေါ်ပေါ်လာတယ် ..
ကျားသစ်ရုပ်မဟုတ်ရင် ဘာရုပ်လဲ ဒေါက်တာ။ မမြင်ဖူး မကြားဖူးတာတွေမို့ ရှင်းပြပါအုံး။